Fanafihana teny Volontara Andoharanofotsy: efatra nidoboka eny Tsiafahy, anisan’izany ilay polisy | NewsMada
Fanafihana teny Volontara Andoharanofotsy: efatra nidoboka eny Tsiafahy, anisan’izany ilay polisy
Tsy afa-bela tamin’ilay fanafihana nitranga teny Volontara Andoharanofotsy, ny herinandro teo, ilay polisy voatonontonona amin’ity raharaha ity. Naiditra vonjimaika am-ponja eny Tsiafahy, afakomaly, izy sy ny olona efatra hafa voalaza ho tompon’antoka tamin’izany, araka ny tatitra avy amin’ny zandarimariam-pirenena…
Nidoboka eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy, afakomaly, ireo jiolahy dimy (polisy ny iray) voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ilay fanafihana teny Volontara Andoharanofotsy, ny herinandro lasa teo. Araka ny fanazavan’ny lehiben’ny sampandraharaha misahana ny serasera eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ny chef d’escadron, Andrianarisaona Herilalatiana, rehefa natao ny fanadihadiana momba ny fanafihana teny Andoharanofotsy, efa niarahana nahalala fa nisy olona telo indray tratra tamin’iny alina nitrangan’ny fanafihana iny taorian’ny fanarahan-dia nataon’ny zandary. Tamin’izay koa no nahatrarana olona iray tao anatin’ny fiahiahiana. Nosamborina ihany koa ny mpiambina roa lahy ary ny ampitson’io nitrangan’ny fanafihana io, nitondra alika mpitsongo ny zandary ka nivantana tao amina tranon’olona iray ka lasa efatra, araka izany, ny isan’ireo voasambotra. Niampy olona iray hafa indray izany satria nisy mpiambina sivily iray hafa koa voasambotra.
Nambaran’ity manamboninahitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ity fa efa misy ny famotorana natao momba ity polisy voasaringotra amin’ity raharaha ity. ”Raha vao niseho ilay fanafihana, naharay antso vonjy avy hatrany ny zandary taorian’ny fitsoahan’ireo jiolahy. Nanenjika sy nametraka sakana ny zandary ka 300 metatra miala io trano voatafika io no nisy lehilahy iray nisitrika tao anaty kirihitr’ala ka nosokirina tao izy”, hoy hatrany fanazavany. Nambarany fa tamin’ny fotoana nitrangan’ny vaky trano no misy olona miafina ao anaty kirihitr’ala izay somary mahavariana ihany izany ka izany koa ny antony nisamborana azy, raha ny fanazavana hatrany.
Niaiky ny tompon-trano…
Nohamafisin’ny zandary hatrany fa nandritra ny fotoana nitsoahan’ireo jiolahy nihanika ny tamboho no nampilatsaka ilay basy. Nampifanatrehana tamin’ny tompon-trano ilay polisy ary niaiky fa isan’ireo tompon’antoka tamin’ny fanafihana tao an-tranony ity polisy tratra ity ary tsy nisaron-tava tamin’io fotoana io, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny serasera eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Nilaza anefa ny lehiben’ity polisy voasambotra ity fa vao avy niasa ary handeha hody izy tamin’io fotoana io ka nifanehatra tamin’ity fanafihan-jiolahy ity. Nilaza hatrany koa ny zandary fa tsy fiaran’ny zandary no nampiasain’izy ireo tamin’io fotoana io kanefa nanatona azy ireo avy hatrany ilay polisy tamin’io fotoana io.
Fantatra izao fa jiolahy miisa 10 no mbola karohin’ny zandary amin’ity raharaha fanafihana teny Volontara Andoharanofotsy ity. Andrasana, araka izany, ny fotoam-pitsarana ity raharaha ity.